Ọrụ Ndị Dị Mfe | Martech Zone
Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụghị mgbe niile Marketing, Blọọgụ, malitere ịrịa Izi ozi, wdg Mgbe ụfọdụ, ọ bụ nnọọ oké ahịa ọrụ. Enwerem nche ncheta Fosil nke di m nso ma burukwa ya n’anya n’ihi na ụmụ m zụtara m otu ụbọchị ọmụmụ. Enwere m olileanya na ọ ga-adịru mgbe ebighị ebi. Batrị ahụ dịruru otu afọ ma ọ bụ abụọ. Batrị m gwụrụ ụbọchị ole na ole gara aga mana m na-eyiri elekere ahụ. Kindda ụdị ogbi ma m mere ya n'ihi na mgbe m na-ele ya anya m na-eche banyere ụmụ m… ma ọ bụrụ na m na-na-ele elekere kwụsịrị, M ga-echeta na-a batrị.
Mgbada site na ọrụ m bụ Ndị na -ere ahịa Windsor (West n'akụkụ nke Meridian dị nnọọ South nke gburugburu). Enwetụbeghị m ụkwụ na ebe ahụ (hey… Abụ m otu nna 38 dị afọ, gịnị ka m chọrọ ọla maka?) Ma kpebiri ịhụ ma ọ bụrụ na ha ga-etinye m batrị ahụ.
Ka m na-abanye n’ọnụ ụzọ ụlọ ahụ, otu nwanyị dị ụtọ bịakwutere ma jụọ ma ọ̀ ga-enyere m aka. Agwara m ya banyere elekere ahụ, ọ nara m ya ma nye m ya n'aka onye ọrụ nche (?) Nke nwere ọfịs ebe ahụ na ụlọ ahịa ahụ. N'ime nkeji ole na ole (nke dị mkpa), ọ pụtara batrị ọhụrụ, setịpụ oge, hichaa elekere ahụ wee nyeghachi m ya. Ọ na-eyi otu n'ime iko ọla ndị ahụ dị jụụ ma na-eme ngwa ngwa ngwa ngwa m nwere ike ịhụ etu o si mee ya. Enwere m oge iji gụọ otu isiokwu etinyere na mgbidi nke turu ọnụ na ndị folks si Indianapolis kwenyesiri ike na Windsor ga-edozi elekere na nche ha. Enweghị m obi abụọ ọ bụla.
Ire ahia nwere ike iburu gị azụmaahịa, mana nnukwu ọrụ ndị ahịa agaghị ada ada na idobe ya.
N'ime nkeji ole na ole, akwụrụ m ụgwọ (nnukwu 'ol $ 9, batrị gụnyere) wee pụọ n'ụlọ ahịa ahụ. Nwaanyị ahụ nke mere m ihe ọma gwara m ka m lọta n’isi nso. Chaị.
Amaghị m mgbe m ga-adị mkpa maka ọla ọla ọzọ. Ọbụlagodi na anọghị m, ịmara ebe m ga-anọ otu afọ site ugbua mgbe batrị elekere m nwụrụ!
Tags: Ndị ọrụ nlekọta ndị ahịaIndiaọlaiko ọlaọlaWindor jewelers